20+ Umdibaniso oMdaka oMhle woMdibaniso oMdaka-Umbala weSitayile ka-2021 - Iikimu Zombala Ezivavanyiweyo Zoyilo
20+ Umdibaniso oMdaka oMhle woMdibaniso oMdaka-Umbala weSitayile ka-2021
Ukuba ubusazi kakuhle iphalethi eluhlaza okwesibhakabhaka nomhlophe kwakudala kwaye ulungele isivuno esilandelayo sombala ongqindilili, omangalisayo, okhuthazayo ngokwenyani, yonwabile: Siqokelele indibaniselwano yethu esiyithandayo engalindelekanga- ngaba unesibindi ngokwaneleyo ukuba ungangena ?
🏡 Uyakuthanda ukwazi zonke iindlela zangoku zoyilo? Sikukhusele.
Jonga igalari 27Iifoto UEmily Minton Redfield 1I-27Cherry + Brass
Iindonga ezibomvu zeCherry ezinokugqitywa kokuqaqamba kunye neentsimbi zobhedu zizisa ubunewunewu obuphezulu kweli gumbi leti lenzelwe nguMarie Flanigan Indlu entle Ikhaya liphela eDenver. Ufezekile umzuzu ozolileyo ofunekayo omnye.
UKaryn Millet MbiniI-27I-Cream ye-Orenji + Teal enzulu
Umyili uCelerie Kemble makavumele intombi yakhe ukuba ikhethe umbala wegumbi elikwigumbi labo eManhattan. Iindonga zekrimu yeorenji ezibhangqwe kunye nekhaphethi enzulu yeti kunye nokugxininisa kuzala umoya ovuthayo.
ukhathalelo lwezityalo ze pointetta
UWerner Straube 3I-27I-Sapphire + lwemostade
Igumbi eligcwele 'igumbi eliguqukayo' kwindlu yaseMichigan eyilwe nguCorey Damen Jenkins yindawo emnandi yabantwana yokwenza umsebenzi wesikolo okanye abantu abadala ukuba babe neziselo zasemva kwesidlo sangokuhlwa. Iindonga ezinamacangci eneneni nguPhilip Jeffries wokugubungela udonga.
UDavid A. Umhlaba 4I-27Tangerine + Umnquma
Umbala opeyintiweyo womnquma eludongeni olwenziwe ngepateni eqaqambileyo yeorenji? Ayenzi njalo isandi ngathi kufanele kusebenze, kodwa eli gumbi lokutyela-liyilwe nguChenault James for Indlu entle Ikhaya Lonke eNashville-bubungqina bokuba iyayenza.
Ukubuyisela kwakhona iiRoll 5I-27I-Aqua + Raspberry
UNick Olsen wasebenzisa imibala ejingayo epinki naluhlaza ukugubungela iyintshi nganye kwigumbi lokulala lamantombazana-jonga uChristopher Farr Cloth lodonga eluphahleni!
I-TRIA GIOVAN 6I-27IPistachio + Periwinkle
Le concoction imnandi yegumbi lokuhlala, eyilwe nguAmanda Lindroth, inika ubungqina obungenakuphikiswa bokuba izichasi ziyatsala. Wayenelaphu leQuadrille kwiisofa ezishicilelweyo ngokudityaniswa kombala wesiko ukubopha ii-hues zombini kunye,
UJane Beiles 7I-27I-Royal Blue + Orchid
Akukho nto idibanayo, kodwa konke kuyasebenza kunye, utshilo umyili uCharlotte Barnes wekhitshi elihlaza okwesibhakabhaka kwindlu yosapho yaseMzantsi Carolina. Ukuya kwakhe emthunzini? I-Farrow kunye neBhola yeHague eBlue.
phakathi kwinkulungwane yexesha
UTomas loof 8I-27Blush + Mahogany
U-Matthew Carter wasebenzisa iindonga ezipinki ezipinki-ezipeyintwe kwi-Precocious ka-Benjamin Moore-njengendawo engemva kwefanitshala yeplanga yakudala kwikhaya leholide eBahamas.
UTomas loof 9I-27Mint + Ngwevu Ngwevu
Ukuhlaziya ikhitshi esele likho lendlu yePalm Beach yomyili, umyili uCaroline Rafferty wapeyinta iikhabhathi eziluhlaza emva kwesidlo sasemini (Benjamin Moore's Dewdrop), wafaka iblitethi ebomvu ebomvu emnyama esiqithini, wagquma imigangatho eBenjamin Moore's Ngwevu iSikhova.
UDavid A. Umhlaba 10I-27Iris + Crimson
Ngaba uziva unesibindi? Ngophahla lwayo olu mfusa (iDetal Petal nguPratt kunye noLambert) kunye nodonga olubomvu (iNgxelo ebomvu, kunye noPratt kunye noLambert), igumbi lokuhlala lendlu kaK Katie Brown's Connecticut yindawo yokubonisa.
UKUPHELELWA KWECHRISTOPHER Shumi elinanyeI-27I-Fuchsia + I-Blue yeqanda eliBomvu
U-Kristen McCory wasebenzisa iidyasi ezimbalwa ze-pinki ezi-saturated-ephefumlelwe ngumlomo kamakhulu kamthengi wakhe-ukujika unobhala ondithobileyo abe yindawo yokugxumeka kwindawo ephezulu yendlela ebhinqiswe iphepha lodonga oluhlaza.
UDouglas Friedman 12I-27Mthubi + Mhlophe
Iphepha lodonga leClarence House elimthubi nelimhlophe eliqaqambileyo kule nook yesidlo sakusasa eyilelwe nguKrista Ewart iqinisekisa ukuqala komhla oqaqambileyo. 'Imthubi intsha kwaye inelanga, kwaye igumbi lihamba umgama omncinci kunye nezitulo ezimhlophe zase China zaseChippendale kunye nomgangatho opeyintiweyo omnyama, utshilo.
ULuka White 13I-27Teal + Isitena
Imibala egcwalisiweyo ilinganisela amandla okwakha, utshilo uJanie Molster kolu phononongo lwe-1700s eVirginia apho amalengalenga abomvu axhonywe eludongeni kwiBill Moore's Blue Spring Blue.
UMary Costa Photography 14I-27Umbane uBlue + Aquamarine
'Ndiyathanda ukudibanisa imibala engqindilili yosapho olunye, utshilo uCainlin Murray, umyili osemva Uyilo lweLacquer eMnyama . 'Ukubandakanya umbala othintela izinto zesiteyitimenti kudala ubukhulu kunye nokwahluka.' Ucebisa ukuba usebenzise ubugcisa obubonisa zombini ii-hues ukubabopha kunye kunye nokwenza ukuba ukujonga kube ngathi kunenjongo kwaye kupolishiwe.
iintlobo ezahlukeneyo zemidiliya
UJonny ukhaliphile Shumi elinantlanuI-27Ipesika + Mnyama
'Zininzi imibala eyahlukeneyo yombala wepesika oguqukayo onje ngoku, utshilo uKayla Hein, umlawuli woyilo Inqaba yanamhlanje . Ukuba ufuna ukuyenza ukuba ijongeke ngokusesikweni, zama ukuyidibanisa nomnyama, njengoko kubonisiwe kwigumbi lokuhlala laseNew York City eliyilwe nguJamie Drake.
UStephen Kent Johnson 16I-27Amalahle + Otshe iorenji
'Olu ludibaniso oluthandwa kakhulu ngabathandi bangaphakathi bale mihla, utshilo umyili UFrancesco Bilotto . 'Kungcono ukusebenzisa oku kumagumbi okulala okanye kumagumbi eendwendwe apho ukwenza indawo' kungathathi cala kwezesini 'yeyona njongo.' Apha, umyili wefama uNina ongumlimi otyhidiweyo wee-grey kwigumbi lokulala lasekhaya lase-New England kunye nokuphoswa kweorenji.
UBrian Doben 17I-27Teal + Ubhedu
Kweli khitshi laseManhattan lenziwe nguPhilip Gorrivan, iithayile ze-mosaic kunye nophahla olucocekileyo kwiBlue Moore's Oceanic Teal thabatha umbala kwiphepha lodonga kwindledlana.
U-ERIC PIASECKI 18I-27I-Lemon + i-Candy Apple
Izitulo zokutyela kunye nezitulo zasekhitshini ziindlela zoqalo eziqhelekileyo ze-Chippendale, kodwa kwi-lacquer ephezulu iyamangalisa, 'uyilo uJesse Carrier uthi ngeli khaya laseNaples, eFlorida. 'Kufana nokuba zifakwe iilekese.' I-glaze etyheli yeendonga iphefumlelwe yitiles yokubuyela umva nguPopham Design.
Ngoc Minh Ngo 19I-27Iamethiste + Bomvu
Ibhantshi egutyungelwe yi-velvet isebenza njengesihlalo esityebileyo kwitafile yokutyela, egutyungelwe ngombala omfusa ukusuka kumalaphu amahle. Intombi eneminyaka emithathu ubudala uDavid Kaihoi uhleli esihlalweni esibomvu seTripp Trapp nguStokke kwigumbi eliseNew York.
uyilo olusemthethweni lwamagumbi okuhlala
UBjorn Wallander Amashumi amabiniI-27I-Royal Purple + yolwandle
Kule studio yaseBrooklyn yenzelwe nguNick Olsen, iserape yaseMexico lukhetho olungalindelekanga kwisitulo sikaLouis XV. Ingubo yeediliya iphefumlele isikimu sombala odlamkileyo. Isihlalo esithandekayo esiqhekezayo esimhlophe esifakwe kumbhobho oluhlaza siboniswa kwi-Super White ngamacango acocwe eAmazon Moss, bobabini nguBenjamin Moore.
UMaura McEvoy amashumi amabini ananyeI-27Iruby + Ink
UNick Olsen wayila i-Moorish arched headboard kwisikhumba esimenyezelayo esibomvu kunye ne-lavender imibhobho yokuthelekisa iindonga zegumbi lokulala laseManhattan kwiPeyinti entle yaseYurophu i-Eurolux Interior Matte kwiNavy Blue.
UJonny ukhaliphile 22I-27Ikalika + Pearl Pink
'Sasifuna ukuba igumbi lokutyela libe yibhokisi entle enamatye anqabileyo,' utshilo uChristina Murphy. Usongele igumbi Yomelele Iphepha lodonga eliqaqambileyo laseCorean, lipeyintwe ngesandla kumhlaba wesilika. Sihlalo weHickory Izitulo ezisecaleni kweLinwood kwigqabi lesilivere-kugqityiwe nakwimidlalo ebonisiweyo ukusuka Ihlabathi elikude ukuphucula imeko ye-shimmery.
UFrancois Dischinger 2. 3I-27UKelly Green + Ithanga
Iindonga zabantwana abancinci ziphakanyisiwe kwindawo yokudlala yase-Marimekko edlalayo yase-Kuningatar e-a Indawo ephezulu yeSixeko saseNew York ehonjiswe nguSteven Sclaroff.
UJohn Kernick 24I-27Umbala oluhlaza + Mfusa
Kwiminyaka-12 ubudala Igumbi lokulala likaCece Bette laseCape Cod ngumyili u-Annie Selke, ibhedi yama-Victoria evela kwingqokelela yeKhaya lika-Annie Selke Ifanitshala yeVanguard wanyuselwa eSeema ukusuka Amacandelo eCalico . Iindonga zazipeyintwe Ingca entsha esikiweyo ngo UBenjamin Moore . Siqale ngesiseko esiluhlaza esiluhlaza songeza i-pinki, iorenji kunye ne-aqua, utshilo uSelke.
UJonny ukhaliphile 25I-27Iti eluhlaza + noDusty Brown
Ukuzisa imvakalelo yendalo kwigumbi lokuhlala eNew York, umyili u-Fawn Galli usebenzise into eluhlaza eluhlaza: 'Andicingi ukuba umbala kufuneka uzele kakhulu okanye womelele eludongeni.' Izitulo zikaPal + Smith zaphakanyiswa eSafari nguManuel Canovas, isofa yePaley evela kwiiProfayili, ikhaphethi yeFiona Curran Palette yeRug Inkampani, kunye nomzobo ka-Anne Siems unika igumbi 'umbono wencwadi yamabali.'
ULucas Allen 26I-27Intwasahlobo eluhlaza + iBubblegum
Faka umbala kwizilingi uphakamise iliso phezulu, wenze igumbi libonakale lide kwaye likhulu. UJamie Drake ukhethe uBenjamin Moore's 'Ndiyakuthanda Pinki' ukuthelekisa isikimu esiluhlaza sikaKelly kuyo yonke indawoAmagumbi amabini okulala eManhattan.
UBjorn Wallander 27I-27I-Emerald + ebomvu
'Ndiyayithanda ijiyometri elukhuni yesifuba ecaleni kwamakhethini,' utshilo uNick Olsen ngale studio yaseBrooklyn. Ukongeza umnwe othambileyo kwibhedi ye-Heimdal yentsimbi esuka e-Ikea, wafaka ubude begwebu eSchumacher's Hong Kong kwibhodi yentloko. Izibane zeglasi zeMercury ezivela kwi-Circa Lighting zenza ifuthe. Zibekwe kwiitafile zokuphela kweediliya-ekuqaleni zazimdaka, u-Olsen wazipenda ngombala oqaqambileyo waseTshayina, 'kuba igumbi ngalinye lifuna ukubomvu.'
ukukhanya kwekrisimesi izimvo
OkulandelayoImibala yethu eyintandokazi yepeyinti yeKhitshi ngalo lonke ixesha Isibhengezo-Qhubeka nokuFunda apha ngezantsiUAmy Preiser NdinguMhleli oMkhulu we VERANDA.com, kwaye uyakundifumana nakwiisayithi zoodade bethu ELLEDECOR.com nakwiHousebeautiful.com. ULauren Smith McDonough Umhleli oMkhulu ULauren ungumhleli ophezulu kwi-Hearst. UEmma Bazilian Iimpawu eziPhambili zoMhleli U-Emma Bazilian ngumbhali kunye nomhleli egubungela uyilo lwangaphakathi, iindlela zentengiso kunye nenkcubeko.Lo mxholo wenziwe kwaye ugcinwe ngumntu wesithathu, kwaye ungeniswe kweli phepha ukunceda abasebenzisi ukubonelela ngeedilesi zabo ze-imeyile. Unokwazi ukufumana ulwazi oluthe kratya malunga noku kunye nomxholo ofanayo kwipiyano.io
ekhaya amazwi amnandi ekhaya
vela imiphezulu yeetafile outlet
Imveli yekrisimesi iziselo ezinxilisayo
imibono yokuhombisa isitya esikhulu